I-Backwaters Indawo yokuhlala eKhaya kunye neCanoeing kunye nokutya kwaselwandle -Munroe - I-Airbnb
I-Backwaters Indawo yokuhlala eKhaya kunye neCanoeing kunye nokutya kwaselwandle -Munroe
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguVoye
I-VOYE HOMES Mundro Greenland yindawo yabucala ye-03 yokulala yelifa lemveli i-cottages ene-AC kunye namagumbi angenayo i-AC abekwe kwi-lap ye-Ashtamudi Lake backwaters ekhangayo e-kerala, enexabiso elifikelelekayo. Isiqithi saseMunroe eKollam yeyona ndawo ifanelekileyo yabakhenkethi kwiCanal Cruise kunye nendawo efanelekileyo yeeGetaways zoSapho okanye uhambo lweQela. Le villa ibekwe ngokufanelekileyo kufutshane nomlambo iAzure Kallada kwaye inika ilungelo elikhethekileyo lokuhamba ngesikhephe kunye nalapho unokufumana okuninzi. yolonwabo imini yonke.
I-VOYE HOMES I-Mundro Greenland likhaya leeholide labucala nelinoxolo liselunxwemeni loMlambo iKallada. Esi siqithi saseMunroe singasemva kweKhaya sinika ubuntofontofo obusisiseko ngamaxabiso afikelelekayo ngokulula. Yindlu yokulala esanda kwakhiwa eyi-03 enesitayile somoya (Amagumbi angama-02) kunye namagumbi angenamoya (iGumbi le-01) kunye nendawo yokutyela exhotyiswe kakuhle ekwihektare zohlaza lwendalo. Sinikezela ngendawo yokupaka yabucala, i-Wifi yasimahla, isidlo sakusasa esiluncedo, izixhobo zococeko zobuqu, indawo ekhuselekileyo nekhuselekileyo elawulwa ngumamkeli wethu wasekuhlaleni uMnu. Sethu nosapho lwakhe oloyikekayo. Igumbi ngalinye lixhotyiswe nge-cable flat-screen TV, indawo encinci yokutyela, ifakelwe kakuhle kunye negumbi lokuhlambela labucala elineshawa.
Isiqithi sase-Munroe i-Kollam yiqela leziqithi ezintle eziku-confluence ye-Ashtamudi echibini kunye nomlambo waseKallada, kwisithili saseKollam, eKerala. Isiqithi sinokufikelelwa ngeendlela, umzila kaloliwe kunye nokuhamba emanzini angaphakathi. ISiqithi saseMunroe yeyona ndawo inomtsalane kubakhenkethi kwaye yenye yezona ndawo ziphambili zabakhenkethi eKollam nakwindawo yokuqala yaseKerala esekwe kukhenketho, apho umntu anokufumana uhambo lwamaphenyane, ukuhamba ngephenyane endlwini kwaye abukele inkqubo yokubuyisela i-coir, ukuloba, ukutyisa iiprawns, iwotshi yeentaka ezifudukayo, emxinwa. imisele nemijelo yamanzi, iifama zekhokhonathi kunxweme lwechibi, amachibi kunye nezityalo zemangrove.
Bakhaya baseVoye, kwikhaya ngalinye wamkelwa ngummkeli wethu omangalisayo kwaye benza okungaphezulu kunokunikezela ngezitshixo. Baza kukunceda wazi ngakumbi ngendawo oya kuyo njengenkcubeko yasekhaya, ukutya, ubomi kunye nokunye okuninzi ukuze uzinze ebomini kwindawo entsha. IiNdawo zeLifa leMveli kwiiBhanki zoMlambo iKallada - VOYE HOMES Mundro Greenland.
• Isidlo sakusasa sesintu • Ikhokhonathi ethenda • IiTempile • Ukuhamba ngephenyane • Ukuhamba ngesiqithi
• Uhambo lwasezilalini • Ukucutshungulwa kweeclam • Umculo wesintu • Ivenkile yasekuhlaleni • Ikhaya lemveli • Isidlo sasemini semveli • Ubuchule bobuchwephesha beclam obumangalisayo • Kwikhaya lemveli • Ivenkile yasekuhlaleni • Ukusengwa kwenkomo • Amashwamshwam angokuhlwa • I-tuk-tuk • Ukuluka amagqabi ekhokhonathi
. Ukuxutywa kweSixhobo kunye neZixhobo zokuSila's • Toddy tapping
• Hamba nabalobi ujonge ukuba bazikha njani iimbatyisi.
• Iiyunithi zokwakha izikhephe ezingezoMotho • Uhambo lwasePeruman Jangar
• Ukuloba ngeendlela zesintu • Ukutyelela ichibi lase-Ashtamudi • Ukukhwela isikhephe • Ihlathi leMangrove • Hamba nabalobi ujonge ukuba bazikha njani iimbatyisi.
• Intlanzi • Unonkala •Iprawns • I-Karimeen (intlanzi yeePearl spot) • Iskwidi •I-Oyster • Iimbaza njlnjl. • Ukutya kwe-Kerala yesiNtu • I-Toddy • Iilekese • I-Snacks
Umbuki zindwendwe ngu- Voye
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Munroe Island